Global Voices teny Malagasy » Thailandey mpisera Twitter miatrika fandrahonana noho ny fanehoankevitra momba ireo fiara mpanotrona ny mpanjaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2019 8:08 GMT 1	 · Mpanoratra Prachatai Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika
Ity lahatsoratra  nasiam-panovana ity dia avy amin'ny tranonkalambaovao mahaleotena Prachatai avy ao Thailandy ary navoakan'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Asehony ao ny farangonteny malaza ahitana tsikera antserasera vitsy dia vitsy mitsikera ny fitondra-mpanjaka. Andro vitsy taty aoriana, nisambotra  mpikatroka iray lazaina ho manompa ny fitondra-mpanjaka ny governemanta saingy nolazain'ny manampahefana fa tsy misy ifandraisany amin'ireo fiara manotrona manampahefana izany. Na izany aza, niteraka tahotra fa mety ho lasibatra koa ireo nampiasa ilay farangoteny ity fisamborana ity.
Tamin'ny 1 Oktobra 2019, nalaza tao amin'ny Twitter tao Thailandy ny farangoteny #ขบวนเสด็จ  na fiara sy môtô mpanotrona ny mpanjaka noho ny fahamaroana tsy tambo isaina ireo sioka mitsikera ho valin'ny fandalovan'ireo fiara manondrona ny mpanjaka niteraka fitohanan'ny fiara manodidina ny Tsangambaton'ny Fandresena, Bangkok, ny takariva tao anatin'ny fotoana mahabe olona. Mitoetra ho tsy fantatra izay nentina tao anatin'ny fiara mpitondra mpanjaka. Nalaza ilay farangoteny na dia eo aza ny famerana araka ny lalàna amin'ny fitsikerana ny fianakavian'ny mpanjaka thailandey. Na izany aza, mpisera maro no nitatitra ho nahazo hafatra fandrahonana noho ny sioka nataony mitsikera.
Nilaza  ny Thai Lawyers for Human Rights [vondron'ny mpahay lalàna thailandey mpandala ny zon'olombelona] fa miatrika fandrahonana avy amin'ny mpandefa milaza ho avy amin'ny Lapan'ny Mpanjaka ny mpikatroka iray. Milaza ny hafatra hoe “Miangavy fafao daholo ny kaonty media sosialy rehetra anao amin'ity alina ity ho fiarovana anao.” Nilaza ity vondrona ity fa tsy manana fototra ara-dalàna ny fandrahonana ary tokony hanao famotorana ny ao amin'ny Lapam-panjakana satria nataon'ny mpisoloky ny hafatra.
Nalaza ihany koa ny lahatsoratra amin'ny media sosialy miresaka ny vaovao iray nivoaka tamin'ny volana jona ahitana ny Amperora Japoney Naruhito izay nanajanona  ny fiara mpitondra sy mpanotrona mpanjaka ho amin'ny sisindalana mba ahafahan'ny ambulance iray mandeha aloha.
iLaw, fikambanana iray mahaleotena, no nitatitra  fa araka ny lalànan'ny fifamoivoizana 2019, dia omen-dalana ny fiara niray mamonjy taitra hihoatra izay rehetra jiro mena sy hiantsona amin'ny faritra rehetra voarara. Tsy maintsy mijanona ny mpandeha an-tongotra ary mijanona an-tsisindalana. Tsy maintsy miato na mijanona amin'ny ankavia ny fiara hafa rehetra (anatin'izany ny biby) fa tsy mahazo mijanona amin'ny fihaonan-dalana [naoty: tanaty tara-pisainana britanika io firenena io ka anatin'izany ny fifamoivoizana].
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/18/143899/